Baarlamaanka Jaamacadda Carabta: Kenya waxay ku xadgudbeysaa "deris-wanaagga" Soomaaliya - BBC News Somali
Jaamacadda Carabta ayaa markii ugu horreysay ka hadashay muranka dhanka badda ee u dhaxeeya Kenya iyo Soomaaliya, sida lagu sheegay war-saxaafadeed ay soo saareen baarlamaanka Jaamacadda Carabta.
Bayaan ay maanta soo saareen baarlamaanka Jaamacada Carabta ayaa Kenya looga digay in ay ku xadgudubto xuduudaha Soomaaliya.
Baarlamaanka Jaamacadda Carabta ayaa waxa uu taageero u muujinayaa Soomaaliya isaga oo sheegay in Soomaaliya looga baahanyahay inay ilaashato midnimadeeda, nabad-gelyadeeda iyo xoriyaddeeda.
War-saxaafadeed ka soo baxay shir ururku uu ku yeeshay magaalada Qaahira ee caasimadda Masar, ayuu gaashaanka u daruuray sheegashada "beenta ah" ee ay Kenya ku dooneyso in ay ku calaamadaysato baadda Soomaaliya.
Baarlamaanka Carabta waxaa uu Kenya ugu baaqayaa inay banaanka ka marto biyaha Jamhuuriyadda Soomaaliya, kuwaas oo qeyb ka ah biyaha carbeed,sida bayaanka lagu xusuay.
Baarlamaanka Jaamacadda Carabta waxaa uu ka soo horjeedaa sheegashada "beenta ah" ee Kenya, ee khariidada cusub ee ay sameeyeen, taas oo been-abuur ah ay ku tilmaameen.
"Waxaa kale oo aan ka soo horjeednaa cagajugleynta Kenya ee ah inay faragelinayaan arrimaha gudaha ee Soomaaliya, iyadoo ku xadgudbeyso deris-wanaagga iyo heshiisyada caalamiga ah", ayaa bayaanka lagu yiri.
Dowladaha Carabta waxay garab-taagan yihiin Jamhuuriydda Soomaaliya oo ay sheegeen inay horey u qaadday tallaabooyin wax ku ool ah oo dhanka nabad-gelyada iyo xasiloonida ah.
Maxamed Caalin oo ah aqoonyahan soomaaliyeed ayaa sheegay in Kenya ay dooneyso inay ka faa'deysto kala qeybsanaanta iyo xasilooni la'aanta ka jirto Soomaaliya si wadahadal looga gaaro muranka badda.
"Kenya waxaa ilaa hadda ka dhaadhaacsan in muranka lagu xallin karo wadahadal" ayuu yiri Maxamed Caalin.
"Kenya waxaad mooddaa in xiriir uu ka dhexeeyo isdhexgal iyo xiriir qowmiyadeed.. marka Jabuuti maadama ay kamid tahay qowmiyadaha soomaaliyeed ee Geeska Afrika, marka waxay isleedahay ama dhexdhexaad ka noqon kartaa arrinta"
Soomaaliya ayaa u muuqtaa mid ka aamusan khilaafka , waxay ka dhuursugaysaa go'aanka kasoo bixi doono maxkamadda Caddaallada Adduunka ee ICJ.
"Anigu waxaan isleeyahay arinta ceynkaas ah suuragal u noqon mayso madaxweynaha Soomaaliya, waayo dadka Soomaaliyeed oo dhan waxay ogyihiin xaqoodu meesha uu yaallo, gorgortanna kama geli karaan arinta ceynkaas ah," ayuu yiri professorka.
Kenya ayaa la rumaysan yahay inay doonayso in arinta muranka xuduud badeedka lagu xalliyo qaab hoose, halka Soomaaliyana ay ku adkeysanayso in laga warsugo go'aanka Maxkamadda Caddaaladda Adduunka ee loo gudbiyay kiiskan.
Professor Cabdi Ismaaciil Samatar ayaa sheegay in haddii ay dhacdo in Soomaaliya ay gorgortan ka gasho kiiska yaalla maxkamadda, ay taasi noqon doonto "shil weyn oo siyaasadeed oo soo gaari doona wadanka Soomaaliya."